Fiber Optical Distribution furemu Vagadziri & vanotengesa - China Fiber Optical Distribution furemu Factory
Fiber optic distribution furemu (ODF), imwe inonzi fiber optic patch pani yakagadzirirwa kugovera, kubata uye kuchengetedza fiber cores panguva yefoni netiweki, mumakamuri eCATV emakamuri kana mukamuri yemidziyo yemagetsi. Iyo inogona kuiswa neakasiyana adapteri interface inosanganisira SC, ST, FC, LC MTRJ, nezvimwewo zvine hukama nefibha zvishongedzo uye pigtails zvakasarudzika.
Kubata huwandu hwakawanda hwefibre optic nemutengo wakaderera uye wakanyanya kuchinjika, mafirita ekuparadzira emeso (ODF) ari kushandiswa zvakanyanya kune chinobatanidza uye kuronga Optical fiber.
Zvinoenderana nechimiro, ODF inogona kunyanya kupatsanurwa kuita mhando mbiri, dzinoti rack gomo ODF uye rusvingo gomo ODF. Wall wall ODF inowanzo shandisa dhizaini sebhokisi diki iyo inogona kuiswa pamadziro uye inokodzera kugovera fiber ine mashoma madiki. Uye rack gomo ODF inowanzo kuve modularity mukugadzira ine yakasimba dhizaini. Inogona kuiswa pane rack pamwe nekuwedzera kuchinjika zvinoenderana neiyo fiber optic tambo kuverenga uye kududzirwa.
Jera internet optic kuparadzirwa furemu (ODF) chakagadzirwa chando-anokungurutsirwa simbi ndiro ne electrostatic spraying michina ine rakaisvonaka kwezvakatipoteredza kugadzikana uye vimbiso kwenguva refu kushandiswa. Jera ODF inokwanisa kugadzirisa 12, 24, 36, 48, 96, 144 fiber cores kubatana.
Iyo ODF ndiyo inonyanya kufarirwa uye yakazara fiber optic yekuparadzira furemu iyo inogona kudzikisa mutengo uye kuwedzera kuvimbika uye kushanduka kwefibre optic network panguva yese yekuendesa uye kugadzirisa.
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve fiber optic yekuparadzira mafuremu.
Ftth rack rack gomo fiber optic yekuparadzira furemu, ...
Fiber Optical chigamba Panel, 1U-24-SC
19 Rack mugomo internet optic kuparadzirwa furemu 1U ...